Warar Deg deg ah oo kasoo baxaya Halka uu Caawa ku hoyanayo Sh Roobow & Madaxda Dowladda oo.. | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
Warar Deg deg ah oo kasoo baxaya Halka uu Caawa ku hoyanayo Sh Roobow & Madaxda Dowladda oo..
Ku xigeenkii Amiirka Alshabaab Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) ayaa caawa ku hoyanaya magaalada Muqdisho, kadib muddo ka badan 6 sano ah oo uu ka baxay isagoo ka mida hoggaanka sare ee Alshabaab.
Ciidamada Sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa la wareegay ammaanka Mukhtaar Roobow, iyadoo laga dejiyay qeybta ciidamada ee Afisyoone, isla markaana ciidamo fara badan ay galbiyeen.
Mukhtar Roobow ayaa la geeyay xarunta weyn ee Sirdoonka Soomaaliya magaalada Muqdisho oo ku taalla degmada Shibis, kadib markii uu kulan gaaban uu la qaatay madaxda dowladda gaar ahaan madaxweyne Farmaajo.
Waxaa lasoo sheegayaa in sidoo kale caawa uu kulamo la leeyahay madaxda dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha si loo ogaado siyaasadiisa cusub.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku sugan Muqdisho oo arrintaasi wadahadal kala yeeshay madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha, iyadoo waxa arrintiisa laga yeelayo ay go’aansan doonto dowladda Soomaaliya.
Dowladda ayaa la filayaa iney war rasmi ah kasoo saarto arrintan halka Roobow nafsad ahaantiisa uu saxaafadda hor imaan doono.